Home » Toerana fitsangatsanganana » Miarahaba ny Repoblikan'i Kiribati ny sekreteram-panjakana amerikana
Sekretera amerikanina ao State Michael R. Pompeo dia niarahaba ny vahoaka ao amin'ny Repoblikan'i Kiribati tamin'ny faha-40 taonan'ny fahaleovan-tenan'izy ireo:
Amin'ny anaran'ny Governemantan'ny Etazonia amerikana dia manolotra fiarahabana ho an'ny olona ao amin'ny Repoblikan'i Kiribati aho rehefa mankalaza ny faha-40 taonan'ny fahaleovantenan'ny firenanao amin'ity 12 Jolay ity
Ny fatorana lalina nanjakan'ny firenentsika roa nandritra ny ady tany Tarawa dia nanjary fiaraha-miasa efa ela. Miara-manolo-kevitra izahay hiatrika ny olana goavana indrindra ao amin'ny faritra, toy ny fiomanana amin'ny loza voajanahary sy ny jono tsy ara-dalàna, tsy misy tatitra ary tsy voafehy, eo am-pandrosoana ny fampandrosoana ara-toekarena, fanamafisana ny lalàna mifehy ary fanohanana ny faharetan'ny tontolo nosy Pasifika. Raisinay ny fanoloran-tenanareo hampandroso ny vinanay iraisana ho an'ny faritra Indo-Pacific malalaka sy misokatra miaraka amin'ireo demokrasia hafa any amin'ny faritr'i Pasifika ao anatin'izany i Australia, New Zealand, Taiwan, ary Japan. Matoky aho fa ny fifandraisanay dia hampandroso ny tombontsoantsika roa tonta ary hijanona ho loharanom-piarovana, fitoniana ary fanambinana isam-paritra.
Miarahaba anao ary mirary fatratra ny fandriampahalemana sy fanambinana amin'ny taona ho avy.
Pasipaoro tsara indrindra any Karaiba: fidirana amin'ny toerana 152